Celebration of YSE Yangon Branch's First Anniversary and A FUN DAY OUT for Orphan Kids
A happy childhood is as important asagood education for any children to become well-rounded individuals. Love and kindness of family members make their little world almost perfect, and fun activities such as family trips to amusement parks add happy memories to their early life. We believe that every kid, including the ones who do not haveachance to grow up with their families, deservesacheerful childhood.
Therefore, Youth Society for Education is planningafun day out for 30 kids from an orphanage in North Dagon asacelebration for the first anniversary of YSE Yangon Branch. On July 30th, 2018, the kids will be visiting Kidzon Indoor Playground in Junction City Mall (Yangon) and the historic Shwedagon Pagoda on their way back home. There will be Face Painting, singing, Birthday Cake Cutting and many fun activities throughout the day. Also, we are now working on Gift Bags for them, which will include books, stationery, school supplies and new clothes!
We would like to invite you to participate in our project and make someone’s day with us! Please spread the words by sharing this post and invite your friends to donate on this page. We appreciate any amount of your donation and support for us. 🙂
P.S. If we raise extra funds for this project, those funds will be donated to support STEM classes that YSE is offering at ကံ့ကော်မြေမှတွဲလက်များ charity school in North Dagon.
ကလေးငယ်တစ်ယောက်မှာ လိုအပ်တဲ့ ချစ်ခင်၊ကြင်နာ၊ဂရုစိုက်မှုတွေကို မိဘ၊ညီအကို၊မောင်နှမ၊မိသားစု ရှိတဲ့ ကလေးတွေဆီမှာ လွယ်လင့်တစ်ကူရနိုင်ပေမဲ့ မိဘမဲ့ ကလေးတွေဆီမှာတော့ ဒီလိုအခွင့်အရေးကို ရနိုင်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်လှပါဘူး။ သူတို့လေးတွေရဲ့ အနာဂတ်ဘ၀ အောင်မြင်၊လှပဖို့ဆိုတာလဲ ပညာတွေသင်ပေးရုံ၊ပိုက်ဆံတွေထောက်ပံ့ပေးရုံနဲ့ မပြီးသေးပါဘူး။ ကလေးငယ်တစ်ယောက်ရဲ့လိုအပ်တဲ့ ပျော်ရွှင်မှု၊ချစ်ခင်၊ကြင်နာမှုတွေကို ပေးပြီး ပြုစုပျိုးထောင်ပေးနိုင်မှပဲ ဒီကလေးငယ်တွေဟာ အနာဂတ်မှာ လူတော်လူကောင်းတွေ ဖြစ်လာနိုင်မှာပါ။
ထို့ကြောင့် 7/30/2018 နေ့တွင် Youth Society for Education (Yangon Branch) ၏ ၁နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် မြောက်ဒဂုံရှိ မိဘမဲ့ ကလေးများ ကျောင်းမှ ကလေးငယ်လေးအယောက် ၃၀ အား ရန်ကုန်မြို့ Junction City ရှိ Kidzon Indoor Playground သို့ အလည်အပတ်ပို့ဆောင်ပေးပြီး အပြန်တွင် ရွှေတိဂုံဘုရားသို့ လိုက်ပို့မည့်အစီအစဉ်လေးတစ်ခု စီစဉ်ထားရှိပါသည်။
ကစားကွင်းအတွင်း ကလေးများနှင့်အတူ ကိတ်မုန့်ခွဲပေးခြင်း၊သီချင်းများသီဆိုဖျော်ဖြေခြင်း နှင့် ကလေးများ အား face painting ဆွဲပေးခြင်း စသည်ဖြင့် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာကောင်းသော အစီအစဉ်လေးများလည်း ပါဝင်ဦးမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါကလေးငယ်လေးများအား အရုပ်များ၊အဝတ်အထည်များ၊စာအုပ်များ၊ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများလှူဒါန်းရန်လည်း စီစဉ်ထားရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယခုအစီအစဉ်တွင်လှူဒါန်းပါဝင်ခွင့်ရစေရန် အားလုံးကိုနှိုးဆော်လိုက်ပါသည်။
ထို့အပြင် ပိုရှိနေသောအလှူငွေများကို YSE မှထောက်ပံ့ပေးနေသော ကံ့ကော်မြေမှတွဲလက်များ (မြောက်ဒဂုံ) အသင်း၏ MSC အဖွဲ့အစည်းမှ ကျင်းပသော 2018 STEM Nationwide Competition မှာပါဝင်ဆင်နွဲနိုင်ရန် STEM classes များကို ဆက်လက်လှူဒါန်းသွားပါမည်။
မြန်မာပြည်မှလှူဒါန်းလိုပါက မသဇင်မိုး (၀၉ ၄၂၀၀၆၈၅၉ ၅) ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။KBZ
ဘဏ်အကောင့် (၂၆၂၃၀၂၂၃၂၀၀၀၇၈၆၀၁) မှတစ်ဆင့်လဲ လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။